Izindaba - ISIKHUNGO SOKUTSHALA SE-CONCRETE BATCHING PLAY UKWENZA UKWANDA NGOKUPHAKATHI NGESIKHATHI SONYAKA KA-2025
IMAKI LOKUTSHALA LWE-CONCRETE BATCHING UKWENZA UKWANDA NGOKUPHAKATHI NGESIKHATHI SONYAKA KA-2025
Isitshalo sokukhonkolo okuphathekayo noma isitshalo esivame ukukhonkolo sixuba izithako ezidingekayo ukwakha ukhonkolo, okubandakanya isihlabathi, amanzi, okuhlanganisiwe (amatshe, amatshe, njll.), Usimende, intuthu yesilika, njll. Ngokuvamile, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zezitshalo zikakhonkolo ezitholakalayo emakethe, okungukuthi, izitshalo zokuxuba ezomile nezimanzi ezixubekile. Isitshalo sokubhaka ukhonkolo siqukethe izesekeli ezahlukahlukene nezingxenye, okubandakanya ama-mixers, ama-batchers ahlanganisiwe, ama-batcher kasimende, ama-conveyor, imigqomo ehlanganisiwe, ama-chiller, imigqomo kasimende, abaqoqi bezintuli, njll.
Izitshalo zokukhonkolo zikakhonkolo ziyatholakala ngezinhlobo ezahlukene emakethe njengokumile, okuphathekayo nokuphathekayo. Izitshalo zokubhaka ukhonkolo ophathekayo zidinga indawo encane yokufaka futhi kulula ukuyihambisa ezindaweni ezahlukahlukene ezinjengokwakhiwa kwamafulethi, indawo yokwakha amadamu amaningi njalonjalo. Isitshalo se-Concrete batching sesiyinto ejwayelekile emazweni emhlabeni wonke.
Ukuze uhlale 'uphambili' kwabancintisana nabo, cela isampula @ https://www.batchingplantchina.com/?fbclid=IwAR0_lYbQ-vzShhgcTccgCbAWeuV5Q1hWEyyDMOIGrC1-qI7dKjpqwicTcfo
Imakethe Yezitshalo Yokubamba Ukhonkolo Yomhlaba Wonke: Ukwahlukaniswa
Emhlabeni jikelele, imakethe yezitshalo zikakhonkolo ezihlukaniswayo ingahlukaniswa ngesisekelo sokwakhiwa nohlobo.
Ngokuya ngokwakhiwa, imakethe yezitshalo zikakhonkolo ezihlukaniswayo ingahlukaniswa
Okuzenzakalelayo Ukhonkolo Batching Plant
Isakhiwo se-Tower-type Concrete Batching
Ngokuya ngohlobo, imakethe yezitshalo zikakhonkolo ezihlanganisa zonke izingxenye ingahlukaniswa
Isitshalo Sokubhaka Sokhonkolo Esihlanganisiwe
Imakethe Yezitshalo Yokubamba Ukhonkolo Yomhlaba Wonke: Amandla
Ukunyuka kokutshalwa kwezimali kwengqalasizinda emazweni asathuthuka e-Asia Pacific, eYurophu naseNyakatho Melika kuyisici esibalulekile esisekela ukukhula kwemakethe yezitshalo ezihlanganayo zikakhonkolo. Ukukhula kwezimakethe kuqhutshwa kakhulu wukwakhiwa kwamaphrojekthi amakhulu engqalasizinda e-Asia Pacific kanye nezinye izifunda ezigqugquzelwe ukuvuselelwa komnotho. Ngaphezu kwalokho, ohulumeni bezomnotho abakhulu bagxile ekwakhiweni kwezindawo zokuhamba nasekuqiniseni ingqalasizinda yamandla.
Ngaphezu kwalokho, ukuqamba ubuchwepheshe obudingekayo ekukhiqizeni izilinganiso zikakhonkolo kuholele ekwandeni kokusebenza kwenqubo yokukhiqiza, okuholele ekukhiqizeni okuphawulekayo kanye nasokhonkolo osezingeni eliphakeme. Izici ezibalulwe ngenhla kulindeleke ukuthi zikhulise ukufunwa kwezitshalo ezihlanganayo zikakhonkolo kungekudala futhi lokhu kuholela ekukhuleni kwemakethe yezitshalo ezihlanganayo zikakhonkolo.
Ngakolunye uhlangothi, izitayela zakamuva ezimakethe zezitshalo zikakhonkolo ezihlanganisiwe zibe nomthelela ekwehleni komnotho. Njengoba imiklamo yengqalasizinda emikhulu eyehlukene ibambezelekile noma yamiswa ngonyaka odlule, abakhiqizi bebelokhu begxile kumaphrojekthi aphakathi nendawo nabancane njengamanje. Izinselelo ezinkulu ezikhonjwe emakethe yezitshalo ezigoqwayo zikakhonkolo zibandakanya ukwehla kwezindleko zezingxenye zezitshalo ezihlanganayo kanye noshintsho kumanani kagesi.
Amathrendi abalulekile akhonjwe emakethe yezitshalo zikakhonkolo ezihlanganisa konke kusetshenziswa ukusetshenziswa kwezitshalo ezibhincayo ngezindawo zokukhiqiza ukhonkolo. Ngaphezu kwalokho, izinkomba zemvelo sezifuna kakhulu, okubandakanya ukulahla ukungcola kanye nensalela yokuvuselelwa kokhonkolo.
Isikhathi Iposi: Sep-15-2020
I-Automaticaggregate Batching Umanyolo Wokuxuba, Izingxenye Zokukhonkolo Ezihlanganisiwe, Okuzenzakalelayo Isilinganiso Batching Machine, Isistimu Yokulinganisa Yokuhlanganisa Okuhlanganisiwe, Isistimu Yokuqoqa Okuhlanganisiwe, Okuzenzakalelayo Aggregate Batching System,